ဓမ္မရသ: February 2008
သစ်ဝါးတို့စုပေါင်း အိမ်တစ်လုံးကောင်းဆောက်လိုလျှင် ...
ချမ်းသာအစစ်မည်သည်ကို အမိကလည်း မပေးနိုင်။ အဘက...
ဟင်းလင်းမပိတ်၊ လောဘစိတ်ဖြင့်၊ အဟိတ်ပေထ၊ မ၀နိုင်သီး...
သူ မြတ်တို့ထံ၊ နာခံတရား၊ လျှောက်ထားမေးခြင်း၊ မပြုပ...
အကြင်လူ့ ရွာ၊ လူတကာတို့၊ပညာသတိ၊ ကင်းကွာဘိလျက်၊ မိမ...
မြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားသော အသက်ရှည်ကြောင်းတရား (၅) ပါး...
ကံ တည်းဟူသောရေတွေ ခန်းနေပြီ။ ငါး နှင့်တူသောသတ္တ၀ါတေ...
သရဏဂုံ၊ အာဇီဝဋ္ဌမကသီလ (မိမိဘာသာ) ဆောက်တည်ခြင်း
အိုးလုပ်သမား၊ ပြုလုပ်ထားသည့်၊ စားစားကြီးငယ်၊ အိုးသ...
အပြစ်ကင်းကွာ၊ စိတ်ချမ်းသာ၊ မှတ်ပါကုသိုလ် သဘောတည်း။...
လောကီစစ်ပွဲ၌ ... ကင်းသမား၏ပေါ့လျော့မှုကြောင့် တစ်တ...
ပျားကိုပုံပြု၊ ခြကိုတု၊ ရမှုဥစ္စာရတနာ။ သင်ကြားပည...
ကိလေယုတ်မာ၊ ဓမ္မတာ၌၊ အာသာငတ်ငတ်၊ ကြီးရမ္မက်နှင့်၊ ကလ...
အိုသည့်တိုင်အောင် ကောင်းသည့်တရား (၄) ပါး...
သူ့ကိုမမှား၊ မလှည့်စားနှင့်၊ စကားစမြည် ၊ မြွက်သည်စ...
မနာလိုကင်း ၊ ၀န်တိုရှင်း ၊ လက်ငင်းချမ်းသာသည်။ ကေ...
ဓမ္မဒါနဟာ အမတဒါနပါ။ တရားအလှူဟာ မသေခြင်းအလှူပါ။ သူတစ...
ဟုတ်သောအကြံ၊ မှန်သောအကျင့်၊ သင့်သောအယူ၊ ဖြူသောနှလံ...
အမှတ်မှားတော့ အသိမှားတယ်။ အသိမှားတော့ အယူမှားတယ်။...
လုပ်သင့်တာကို လုပ်နိုင်သလောက်လုပ်ပါ။ လုပ်နိုင်တယ...
လူသားတွေရဲ့ စိတ်ဆိုတာ နှလုံးသားမှာ ဘုရားတည်မပေးရင်...
အကုသိုလ်တရားမှ အကျိုးပေးသောအခါ ဒေါသမဖြစ်လိုက်ပါနဲ့...
နေရေးကောင်းမှ သေရေးကောင်းမယ်။ နေရေးဆိုးရင် သေရေးဆိ...
တရားမသိတဲ့သူဟာ ငြုပ်သီးထဲကပိုးနဲ့ တူ၏။ ငြုပ်သ...
သေခြင်းတရားဟာ မှည့်နေတဲ့ အသီးလိုဘဲ အချိန်မရွေး ကြေ...
မိုက်တယ်ဆိုတာ ကိုယ်ဘဲခံရတာ။ ကောင်းတယ်ဆိုတာ ...
မြတ်သောအကျင့်သီလမရှိဘဲ အနှစ်တစ်ရာ အသက်ရှင်နေရတာထက...
လူမိုက်တစ်သောင်း ၊ ချီးမွမ်းရှောင်းလည်း ၊ လူကောင်း...
မိုက်သူသည် မိမိလုပ်ငန်း မအောင်မြင်လျှင် တစ်ခြားသူ...
ကိလေသာတည်းဟူသော အာသဝေါတရားတို့ မကုန်ခန်းသေးဘဲနဲ့ ...
ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင် တရားနာခြင်း ...
စိတ်သည် မြင်နိုင်ခဲ၏။ သိမ်မွေ့၏။ မိမိနှစ်သက်ရာ အာရ...
စိတ်သည် ဆုံးမရန် အလွန်ခက်၏။ အလွန်လျှင်မြန်၏။ေ...
ဖြစ်ပြီးအဟောင်း ၊ တိတ်ဇာတ်ကြောင်းကို ပြန်ပြောင...
အတွေးအခေါ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ သူများမှားတာကို သင်ခန...
သဒ္ဓါ ၊ မေတ္တာ ရှေးရှုကာ ၊ ချစ်တာမြင့်မြတ်သည်။ သတိဥာဏ...
သူတပါးရဲ့ အလိုဆန္ဒကို ဖြည့်ဆည်းပေးလိုက်ရတာ ကိုယ့်မှ...
ဥစ္စာထဲမှာ အနှစ်ရှာ တွေ့တာ ဒါန ပဲ။ ခန္ဓာထဲမှာ အနှစ်...
သောတာပန်ဖြစ်ကြောင်း (၄) ပါး...
မိတ်ဆွေစစ် (ဥပကာရ မိတ်ဆွေ) လေးမျိုး
သစ်ဝါးတို့စုပေါင်း အိမ်တစ်လုံးကောင်းဆောက်လိုလျှင် နိမ့်မြင့်တိုရှည် မှီရာရာ စီပေးပါ... လမ်းသွားချင်း ပက်ပင်းခဏကြုံတွေ့ကြရာ၌ ငါပြောတာမှ အဟုတ်၊ ငါပြောတာမှ အမှန်၊ ငါကြံတာမှသဘောမိ
ဟူ၍ ငါတကော မကောမိစေရာ။ - သူလည်းဘဲ သူ့အတွေ့အကြုံခုံမင် ဂုဏ်တက်ချင်ပေလိမ့်မည်။ - ကိုယ်လည်းဘဲ ကိုယ့်အတွေ့အကြုံပုံတင် ဂုဏ်တက်လျက်ကပင်။ - ဖဲကစားရာ၌ကုလားချင်းတူပါလျက်နှင့် ငါ့ကုလားကဓားပါသည် ပြောကြားလျှော်စား
ရေးသားသူ အောင်ဦး ရေးသားချိန် 29.2.080ရေးသားခဲ့ရန်
ချမ်းသာအစစ်မည်သည်ကို အမိကလည်း မပေးနိုင်။ အဘကလည်း မပေးနိုင်။ ဆွေမျိုးကလည်း မပေးနိုင်။ ချမ်းသာတု ကိုသာ ပေးနိုင်၏။ မိမိ၏ စိတ်မြတ်ကသာလျှင် မိဘဆွေမျိုးတို့က ပေးနိုင်သော ချမ်းသာထက် ပို၍စစ်မှန်သောချမ်းသာကို ပေးနိုင်၏။
ဟင်းလင်းမပိတ်၊ လောဘစိတ်ဖြင့်၊ အဟိတ်ပေထ၊ မ၀နိုင်သီး၊ စပါးကြီးမြွေလို၊ ရတိုင်းမျိုသော်၊ ဤကိုယ်နောက်နစ်၊ ဘေးကြီးဖြစ်လိမ့်။
သူ မြတ်တို့ထံ၊ နာခံတရား၊ လျှောက်ထားမေးခြင်း၊ မပြုပျင်းက၊ ညံ့ဖျင်းပညာ၊ ထုံထိုင်းစွာ၏၊ ကြားနာဓမ္မ၊ သုတဖွေစစ်၊ ကျိုးပြစ်အရေး၊ လျှောက်မေးတတ်စွာ၊ သူတကာမူ၊ ပညာကြွယ်နက်၊ ဉာဏ်ထက်မြတ်၏။
ရေးသားသူ အောင်ဦး ရေးသားချိန် 28.2.080ရေးသားခဲ့ရန်
အကြင်လူ့ ရွာ၊ လူတကာတို့၊ပညာသတိ၊ ကင်းကွာဘိလျက်၊ မိမိတဏှာ၊ အ၀ိဇ္ဇာမျိုး၊ နေ့ တိုင်းတိုး၍၊ အရိုးသာရင့်၊ ဥာဏ်မပွင့်ဘူး။
(၁) မိမိနှင့် သင့်လျော်လျောက်ပတ်သော ဆေးဝါးဓာတ်စာ၊ အစားအသောက်၊ အနေအထိုင်တို့နှင့်သာ ပြုမူနေထိုင် စားသောက်ခြင်း။ (၂) အတိုင်းအရှည်သိပြီး ချင့်ချိန်စားသောက်တတ်ခြင်း။
(၃) ကြေလွယ် ကျက်လွယ်သော အစားအသောက်ကိုသာ စားသောက်ခြင်း။
(၄) ငါးပါးသီလမြဲခြင်း။
(၅) ကလျာဏမိတ္တ အဆွေခင်ပွန်းကောင်းရှိခြင်း။
သူတော်ကောင်းမှန် ကောင်းမှုကံ ပြုရန်လွယ်ပေသည်။
သူတော်ကောင်းမှန် မကောင်းကံ ပြုရန်ခက်ပေသည်။
သူယုတ်မာမှန် မကောင်းကံ ပြုရန်လွယ်ပေသည်။
သူယုတ်မာမှန် ကောင်းမှုကံ ပြုရန်ခက်ပေသည်။
လယ်တီဆရာတော်ဘုရားကြီးက ကျောင်းအတွင်း သောက်ရေသုံးရေများ နေ့ စဉ် ညအချိန်၌ ဖြည့်ထားလေ့ရှိရာ တစ်နေ့ တွင် တပည့်သံဃာတော်များ သိသွားပြီး “ အရှင်ဘုရား...ရေကို တပည့်တော်တို့ဘဲ ဖြည့်ပါရစေဘုရား ၊ အရှင်ဘုရား ဖြည့်ထားတဲ့ရေတွေကို တပည့်တော်တို့ မသုံးရက်ပါ ၊ မသုံးရဲပါဘုရား” ဟူ၍ လျှောက်ကြားကြလေရာ လယ်တီဆရာတော်ဘုရားကြီးက အောက်ပါအတိုင်း မိန့် ကြားလေ၏- “တပည့်တို့...ငါ့ကို သနားရင် အသုံးပြုကြပါ။ ဒီလက်တွေ ၊ ဒီခြေတွေနဲ့  တစ်သံသရာလုံး သားကျွန် ၊ မယားကျွန် ဖြစ်ခဲ့ရ တာ။ ဒီဘ၀မှာတော့ ဘုရားကျွန် ၊ သံဃာ့ကျွန် ၊ သာသနာ့ကျွန် ဖြစ်ပါရစေ” ဟူ၍ ဖြစ်၏။
ဆရာတော်အရှင်အာစာရာလင်္ကာရ ဟောကြားတော်မူသော သူတော်ကောင်းတို့နှလုံးသားတရာတော် ... မှ ကောက်နှုတ်၏။
ရေးသားသူ အောင်ဦး ရေးသားချိန် 27.2.080ရေးသားခဲ့ရန်
ကံ တည်းဟူသောရေတွေ ခန်းနေပြီ။ ငါး နှင့်တူသောသတ္တ၀ါတွေ သေဘို့နီးနေပြီ။ သေခါနီး ပျော်ပျော်နေတယ် ဆိုတာ ခေါ်လို့ကောင်းပါ့မလား။ အခုအချိန်ဟာဖြင့် မသေရာရှာဘို့ အချိန်ရောက်ပါပြီ။ သေတာထုံးစံဘဲလို့ဘဲ ပြောမနေပါနဲ့ဦး။
မသေရာလည်း လမ်းခွဲရှိနေတယ် ဆိုတာလည်း သတိထားပါဦး။
ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊ ဓမ္မံသရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊ သံဃံသရဏံ ဂစ္ဆာမိ။
ဒုတိယမ္ပိ ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊ ဒုတိယမ္ပိ ဓမ္မံသရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊ ဒုတိယမ္ပိ သံဃံသရဏံ ဂစ္ဆာမိ။
တတိယမ္ပိ၊ ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊ တတိယမ္ပိ ဓမ္မံသရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊ တတိယမ္ပိ သံဃံသ ရဏံ ဂစ္ဆာမိ။
အနက်။ ။ဗုဒ္ဓံ- မြတ်စွာဘုရားကို၊ သရဏံ- ကိုးကွယ်လဲလျောင်း ပုန်းအောင်းမှီခိုရာဟူ၍၊ ဂစ္ဆာမိ- မှီဝဲဆည်းကပ်ပါ၏။ ဓမ္မံ- တရားတော်မြတ်ကို၊ သရဏံ- ကိုးကွယ် လဲလျောင်းပုန်း အောင်းမှီခိုရာဟူ၍၊ ဂစ္ဆာမိ- မှီဝဲဆည်းကပ်ပါ၏။ သံဃံ- အရိယာသံဃာတော်မြတ်ကို၊ သရဏံ- ကိုးကွယ်လဲလျောင်း ပုန်းအောင်းမှီခိုရာဟူ၍၊ ဂစ္ဆာမိ- မှီဝဲဆည်းကပ်ပါ၏။
ဒုတိယမ္ပိ- နှစ်ကြိမ်မြောက်လည်း၊ ဗုဒ္ဓံ- မြတ်စွာဘုရားကို၊ သရဏံ- ကိုးကွယ်လဲလျောင်း ပုန်း အောင်းမှီခိုရာဟူ၍၊ ဂစ္ဆာမိ- မှီဝဲဆည်းကပ်ပါ၏။ ဒုတိယမ္ပိ- နှစ်ကြိမ်မြောက်လည်း၊ ဓမ္မံ- တရားတော်မြတ်ကို၊ သရဏံ- ကိုးကွယ်လဲလျောင်း ပုန်းအောင်းမှီခိုရာဟူ၍၊ ဂစ္ဆာမိ- မှီဝဲဆည်း ကပ်ပါ၏။ ဒုတိယမ္ပိ- နှစ်ကြိမ်မြောက်လည်း၊ သံဃံ- အရိယာသံဃာတော်မြတ်ကို၊ သရဏံ- ကိုး ကွယ်လဲလျောင်း ပုန်းအောင်းမှီခိုရာဟူ၍၊ ဂစ္ဆာမိ- မှီဝဲဆည်းကပ်ပါ၏။
တတိယမ္ပိ- သုံးကြိမ်မြောက်လည်း၊ ဗုဒ္ဓံ- မြတ်စွာဘုရားကို၊ သရဏံ- ကိုးကွယ်လဲလျောင်း ပုန်းအောင်းမှီခိုရာဟူ၍၊ ဂစ္ဆာမိ- မှီဝဲဆည်းကပ်ပါ၏။ ဓမ္မံ- တရားတော်မြတ်ကို၊ သရဏံ- ကိုး ကွယ်လဲလျောင်း ပုန်းအောင်းမှီခိုရာဟူ၍၊ ဂစ္ဆာမိ- မှီဝဲဆည်းကပ်ပါ၏။ သံဃံ- အရိယာသံဃာ တော်မြတ်ကို၊ သရဏံ- ကိုးကွယ် လဲလျောင်း ပုန်းအောင်းမှီခိုရာဟူ၍၊ ဂစ္ဆာမိ- မှီဝဲဆည်းကပ် ပါ၏။
( ဂ) ကာမေသုမိစ္ဆာစာရာ ဝေရမဏိသိက္ခာပဒံ သမာဒိယာမိ။
( င) ပိသုဏ၀ါစာ ဝေရမဏိ သိက္ခာပဒံ သမာဒိယာမိ။
( စ) ဖရုသ၀ါစာ ဝေရမဏိ သိက္ခာပဒံ သမာဒိယာမိ။
(ဆ) သမ္ဖပ္ပလာပါ ဝေရမဏိ သိက္ခာပဒံ သမာဒိယာမိ။
( ဇ) မိစ္ဆာဇီဝါ ဝေရမဏိ သိက္ခာပဒံ သမာဒိယာမိ။
အနက်။ ။(က) ပါဏာတိပါတာ- သူတစ်ပါးအသက်ကိုသတ်ခြင်းမှ၊ ဝေရမဏိသိက္ခာ ပဒံ- ရှောင်ကြဉ်ရကြောင်း ကောင်းမြတ်သောသိက္ခာပုဒ်ကို၊ သမာဒိယာမိ- စိတ်၌မြဲစွာဆောက် တည်ပါ၏။
(ခ) အဒိန္နာဒါနာ- မပေးအပ်သော သူ့ဥစ္စာကို ခိုးယူခြင်းမှ၊ ဝေရမဏိသိက္ခာပဒံ- ရှောင် ကြဉ်ရကြောင်း ကောင်းမြတ်သောသိက္ခာပုဒ်ကို၊ သမာဒိယာမိ- စိတ်၌မြဲစွာဆောက်တည်ပါ၏။
(ဂ) ကာမေသုမိစ္ဆာစာရာ- ကာမဂုဏ်တို့၌ ကဲ့ရဲ့ထိုက်စွာ ယုတ်မာသောအကျင့်မှ၊ ဝေရ မဏိသိက္ခာပဒံ- ရှောင်ကြဉ်ရကြောင်း ကောင်းမြတ်သော သိက္ခာပုဒ်ကို၊ သမာဒိယာမိ- စိတ်၌ မြဲစွာ ဆောက်တည်ပါ၏။
(ဃ) မုသာဝါဒါ- မဟုတ်မမှန်သောစကားကို ပြောဆိုခြင်းမှ၊ ဝေရမဏိသိက္ခာပဒံ- ရှောင် ကြဉ်ရကြောင်း ကောင်းမြတ်သောသိက္ခာပုဒ်ကို၊ သမာဒိယာမိ- စိတ်၌မြဲစွာ ဆောက်တည်ပါ၏။
(င) ပိသုဏ၀ါစာ- ကုန်းချောစကားကို ပြောဆိုခြင်းမှ၊ ဝေရမဏိသိက္ခာပဒံ- ရှောင်ကြဉ်ရ ကြောင်း ကောင်းမြတ်သော သိက္ခာပုဒ်ကို၊ သမာဒိယာမိ- စိတ်၌မြဲစွာ ဆောက်တည်ပါ၏။
(စ) ဖရုသ၀ါစာ- ကြမ်းတမ်းသောစကားကို ပြောဆိုခြင်းမှ၊ ဝေရမဏိသိက္ခာပဒံ- ရှောင် ကြဉ်ရကြောင်း ကောင်းမြတ်သောသိက္ခာပုဒ်ကို၊ သမာဒိယာမိ- စိတ်၌မြဲစွာ ဆောက်တည်ပါ၏။
(ဆ) သမ္ဖပ္ပလာပါ- အကျိုးမရှိသိမ်ဖျင်းသောစကားကို ပြောဆိုခြင်းမှ၊ ဝေရမဏိသိက္ခာပဒံ- ရှောင်ကြဉ်ရကြောင်း ကောင်းမြတ်သော သိက္ခာပုဒ်ကို၊ သမာဒိယာမိ- စိတ်၌မြဲစွာ ဆောက်တည်ပါ ၏။
(ဇ) မိစ္ဆာအာဇီဝါ- မှားယွင်းသောအသက်မွေးခြင်းများဖြစ်ကြသည့်-
( ၁) သတ္တ၀ါတွေသေစေနိုင်သော လက်နက်များကုန်ကူးခြင်း၊
( ၂) သတ္တ၀ါတွေသေစေနိုင်သော အဆိပ်များကုန်ကူးခြင်း၊
( ၃) သား၊ ငါးများကုန်ကူးခြင်း၊
( ၄) အရက်သေစာများကုန်ကူးခြင်း၊
( ၅) ကျွန်အဖြစ်၊ ပြည့်တန်ဆာအဖြစ်အသုံးပြုရန် လူများကုန်ကူးခြင်း တို့မှ၊ ဝေရမဏိ သိက္ခာပဒံ- ရှောင်ကြဉ်ရကြောင်း ကောင်းမြတ်သောသိက္ခာပုဒ်ကို၊ သမာဒိယာမိ- စိတ်၌မြဲစွာ ဆောက်တည်ပါ၏။
( စာဖက်သူတစ်ယောက် ၏တောင်းဆိုချက်အရ ညစာ စားလို့ရသော ရှစ်ပါးသီလ (အာဇီဝဋ္ဌမကသီလ) ကိုရေးသားလိုက်ရပါသည်။ စာဖက်သူ အားလုံး မိမိတည်ဆောက်ပြီးသောသီလများကို ပိုမိုလေးနက်စွာစောင့်ထိန်းပြီး မရှိသေးသော သီလများကိုလည်း ဆောက်တည်၍ နိဗ္ဗာန် မဂ်ဖိုလ်သို့ လျှင်မြန်စွာ မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေ။)
ရေးသားသူ အောင်ဦး ရေးသားချိန် 26.2.08 1 ရေးသားခဲ့ရန်
အိုးလုပ်သမား၊ ပြုလုပ်ထားသည့်၊ စားစားကြီးငယ်၊ အိုးသွယ်သွယ်သည်၊ တကယ်နောက်ဆုံး၊ ပျက်ကဲ့သုဉ်းသို့၊ တစ်ထုံးထို့တူ၊ သတ္တ၀ါဟူသမျှ၊ အနန္တ၏၊ ဇီဝသမုတ်၊ နာမ်နှင့်ရုပ်လည်း၊ မုချနောက်ဆုံး၊ သေပျက်သုဉ်းသည်၊ အားလုံး အနိစ္စပါတကား။
ရေးသားသူ အောင်ဦး ရေးသားချိန် 26.2.080ရေးသားခဲ့ရန်
အပြစ်ကင်းကွာ၊ စိတ်ချမ်းသာ၊ မှတ်ပါကုသိုလ် သဘောတည်း။
လောကီစစ်ပွဲ၌ ... ကင်းသမား၏ပေါ့လျော့မှုကြောင့် တစ်တပ်လုံးပြုတ်ရသကဲ့သို့
လောကုတ္တရာစစ်ပွဲ၌ ...သတိတရား ပေါ့လျော့မှုကြောင့် ကိလေသာရန်သူတို့၏ နှိပ်စက်ခြင်းကို ခံရ၏။
ပျားကိုပုံပြု၊ ခြကိုတု၊ ရမှုဥစ္စာရတနာ။
သင်ကြားပညာ၊ ပစ္စည်းရှာ၊ ပမာပျားသတ္တ၀ါ။
ကိလေယုတ်မာ၊ ဓမ္မတာ၌၊ အာသာငတ်ငတ်၊ ကြီးရမ္မက်နှင့်၊ ကလက်ကလိန်း၊ ဥာဏ်မထိန်းဘဲ၊ မိန်းမနိုင်ငံ၊ ဆက်ဆံရစ်မူး၊ အလိုက်ကြူးက၊ ညစ်ညူးဆိုးဝါး၊
မိမိပြုကျင့်ရမည့် ထိုကိစ္စသည် ဘုရားအဆုံးအမတော်နှင့် ကိုက်၏၊ မကိုက်၏ ဦးစွာ သတိ၊ သမ္ပဇဉ်ဥာဏ်
၀င်လျက်က ချင့်တိုက်ကြည့်။ ဘုရားကသာ ထောက်ခံ လှေခွက်ချည်းကျန် အလံမလှဲနှင့်။
ရေးသားသူ အောင်ဦး ရေးသားချိန် 25.2.080ရေးသားခဲ့ရန်
(၁) သီလရှိခြင်း။ သီလ (အကျင့်သီလကောင်း) ရှိခြင်းကြောင့်-
(က) အပြစ်ကင်းသောချမ်းသာကို ရ၏။
( ခ) ကိုယ့်ကိုယ်ကို အပြစ်တင်သည့်ဘေးမှ လွတ်၏။
( ဂ) သူတစ်ပါးတို့ အပြစ်တင်သည့်ဘေးမှလည်း လွတ်၏။
(၂) သဒ္ဓါရှိခြင်း။ သဒ္ဓါ ( ဘုရား ၊ တရား ၊ သံဃာ အပေါ်၌ ယုံကြည်မှု) ရှိခြင်းကြောင့်- (က) ဘ၀၏ အခက်အခဲမှန်သမျှကို လွန်မြောက်၏။
( ခ) သံသရာ ၀ဲသြဃမှ လွတ်မြောက်၏။
(၃) ပညာရှိခြင်း။ ပညာ (အသေးစိတ် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း နားလည်မှု ၊ သိမှု) ရှိခြင်းကြောင့်-
(က) တန်ဘိုးအရှိဆုံးရတနာကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူ ဖြစ်၏။
( ခ) လွတ်မြောက်သော ချမ်းသာကို ခံစားရ၏။
(၄) ပုညရှိခြင်း။ ပုည (ဒါန ၊ သီလ ၊ ဘာဝနာစသော ကုသိုလ်ကောင်းမှု) ရှိခြင်းကြောင့်- (က) ရန်သူမျိုးငါးပါး မဖျက်ဆီးနိုင်သောဥစ္စာကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူ ဖြစ်၏။
(ကျေးဇူးတော်ရှင် သီတဂူဆရာတော်ကြီး၏ “အိုသည့်တိုင်အောင် ကောင်းသည့်တရားတော်” မှ ကောက်နှုတ်၏။)
သူ့ကိုမမှား၊ မလှည့်စားနှင့်၊ စကားစမြည် ၊ မြွက်သည်စစ၊ ပြောသမျှကို မှန်လှစေ။
မနာလိုကင်း ၊ ၀န်တိုရှင်း ၊ လက်ငင်းချမ်းသာသည်။
ဓမ္မဒါနဟာ အမတဒါနပါ။ တရားအလှူဟာ မသေခြင်းအလှူပါ။ သူတစ်ပါးကို တရားပေးလှူရင်... သူတစ်ပါးကိုမသေခြင်း ပေးလှူရာ ရောက်ပါတယ်။ မသေ ဓာတ်ပေးအပ်ရာ ရောက်ပါတယ်။ မသေအောင် လုပ်ပေးရာရောက်ပါတယ်။ သူတစ်ပါးကိုမသေအောင် လုပ်ပေးရတဲ့ အလုပ်လောက် ကောင်းတဲ့အလုပ်မျိုး လောကမှာ
ရေးသားသူ အောင်ဦး ရေးသားချိန် 24.2.080ရေးသားခဲ့ရန်
ဟုတ်သောအကြံ၊ မှန်သောအကျင့်၊ သင့်သောအယူ၊ ဖြူသောနှလုံး၊ သူတော်ထုံးကို၊ စွဲသုံးသောထွေ မှန်လှစေ။
အမှတ်မှားတော့ အသိမှားတယ်။ အသိမှားတော့ အယူမှားတယ်။ အမှားသုံးချက်နဲ့ဘဲ လမ်းဆုံးတော့ သေမင်းနိုင်ငံမှာ သေမင်းခန္ဓာ ထိုးအပ်ရတယ်။ ထို အမှားသုံးချက် မလွတ်သေးသ၍ အပါယ်မလွတ်နိုင်သေး။
ကျေးဇူးတော်ရှင် မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ အခေါ်ရှိနှင့် တကယ်ရှိ အရှိနှစ်ပါးခွဲခြားရန်တရားတော် မှ...
ရေးသားသူ အောင်ဦး ရေးသားချိန် 23.2.080ရေးသားခဲ့ရန်
လုပ်သင့်တာကို လုပ်နိုင်သလောက်လုပ်ပါ။ လုပ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးမှ မလုပ်သင့်တာကို မလုပ်ပါနဲ့။
လူသားတွေရဲ့ စိတ်ဆိုတာ နှလုံးသားမှာ ဘုရားတည်မပေးရင် လမ်းဘေးမှာရှိနေတဲ့ အမှိုက်ပုံးကြီးလို ဖြစ်နေတတ်တယ်။ အမှိုက်ပုံတို့ ၊ အမှိုက်ပုံးတို့ဆိုတာ ထားတာကလည်း လမ်းဘေးမှာ၊ ရည်ရွယ်ချက်ကလည်း အမှိုက်ထည့်ဘို့ဆိုတော့ တွေ့တဲ့သူတွေက ကြုံရာ အမှိုက်တွေ ထည့်သွားတယ်၊ အမှိုက်တွေ ထည့်သွား၊ တံတွေး အညစ်အကြေးတွေ စွန့်သွား၊ ကွမ်းသွေးတွေ ထွေးသွား၊ ကောင်းတာ တစ်ခု မှ မထည့်ပါဘူး။ ဒါမျိုးလိုဘဲ ပုထုဇဉ်တွေရဲ့ စိတ်နှလုံးခန္ဓာအစဉ်ဟာလည်း နှလုံးသားထဲ တရားမထည့်ပေးရင် အမှိုက်ပုံးကြီးလို ဖြစ်နေတယ်။ အမှိုက်က သူများတွေ လာထည့်တာ မဟုတ်ဘူး၊ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ထည့်နေတာ။ လောဘက အမှိုက်တွေ လာထည့် ၊ ဒေါသက အမှိုက်တွေလာထည့် ၊ ဣဿာ မစ္ဆရိယ စတဲ့ ကိလေသာတွေက အမှိုက်တွေ လာထည့် ၊ နှလုံးသားထဲ တရားမထည့်ရင် အမှိုက်တွေ ရှုပ်ထွေးပြည့်ကျပ်နေတယ်။
(ယော) ဆရာတော်ဘုရာကြီး အရှင်သီရိန္ဒာဘိဝံသ
အကုသိုလ်တရားမှ အကျိုးပေးသောအခါ ဒေါသမဖြစ်လိုက်ပါနဲ့။ ၀မ်းသာလိုက်ပါ။ အကုသိုလ်အကြွေးကျေပြီ ဟူ၍ နှလုံးသွင်းလိုက်ပါ။
( ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးကသေခါနီးဖြစ်သော နန်းမတော်မယ်နုအား ဆုံးမခဲ့သောသြ၀ါဒဖြစ်၏။)
ရေးသားသူ အောင်ဦး ရေးသားချိန် 22.2.080ရေးသားခဲ့ရန်
နေရေးကောင်းမှ သေရေးကောင်းမယ်။ နေရေးဆိုးရင် သေရေးဆိုးမယ် မှတ်ပါ။
တရားမသိတဲ့သူဟာ ငြုပ်သီးထဲကပိုးနဲ့ တူ၏။ ငြုပ်သီးထဲကပိုး အပူမကြောက်သကဲ့သို့ ဖြစ်၏။
သေခြင်းတရားဟာ မှည့်နေတဲ့ အသီးလိုဘဲ အချိန်မရွေး ကြွေကျနိုင်တယ်။
ရေးသားသူ အောင်ဦး ရေးသားချိန် 21.2.080ရေးသားခဲ့ရန်
ဒေသပူစာ၊ ပညာထက်ညား၊ နတ်များစောင့်လာ၊
ဥစ္စာပေါကြွယ်၊ နုနယ်လှပ၊ လူကချစ်ခင်၊ မိတ်လျှင်မြဲတုံ ၊
ဂုဏ်သတင်းတက် ၊ ဤရှစ်ချက် ၊ မပျက်သရဂုံ အကျိုးတည်း။
မြတ်သောအကျင့်သီလမရှိဘဲ အနှစ်တစ်ရာ အသက်ရှင်နေရတာထက် မြတ်သောအကျင့်သီလရှိပြီး တစ်ရက်မျှ အသက်ရှင်နေရတာက သာ၍မြတ်၏။
ရေးသားသူ အောင်ဦး ရေးသားချိန် 20.2.080ရေးသားခဲ့ရန်
လူမိုက်တစ်သောင်း ၊ ချီးမွမ်းရှောင်းလည်း ၊ လူကောင်းတစ်ယောက် ၊ ပြစ်တင်ကြောက်လော့။
မိုက်သူသည် မိမိလုပ်ငန်း မအောင်မြင်လျှင် တစ်ခြားသူများအပေါ် အပြစ်ဖို့၏။ ထို့ထက် လိမ္မာသူသည် မိမိကိုယ်ကို မိမိ အပြစ်ဖို့၏။ အလိမ္မာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ ဘယ်သူ့ကို မှ အပြစ်မဖို့။
ရေးသားသူ အောင်ဦး ရေးသားချိန် 19.2.08 1 ရေးသားခဲ့ရန်
ကိလေသာတည်းဟူသော အာသဝေါတရားတို့ မကုန်ခန်းသေးဘဲနဲ့ ငါချမ်းသာလိုက်တာ ဟူ၍ ဘယ်သောအခါမှ မတွေးတောလိုက်ပါနဲ့။
ရေးသားသူ အောင်ဦး ရေးသားချိန် 19.2.080ရေးသားခဲ့ရန်
အခါတစ်ပါး၌ ဘုရားရှင်သည် နန္ဒမထေရ် တရားဟောသောနေရာသို့ သွားပြီးညဉ့် သုံးယံ ကာလပတ်လုံး တရားနာကြားပြီး သာဓုခေါ်ဆိုတော်မူ၏။ နန္ဒမထေရ်သည် ထိုသို့ရပ်လျက် တရားနာနေသော ဘုရားရှင် အားမြင်၍လာရောက်ကာ လက်အုပ်ချီမိုးရှိခိုး၍ ဤသို့လျှောက်၏- “ မြတ်စွာဘုရား...မြတ်စွာဘုရားသည် ဘုရားရှင်၏ နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်း ရှိတော်မူပါလျက် လွန်စွာပြုနိုင်ခဲသောအမှုကို ပြုတော်မူပါပေစွ” ဟု လျှောက်၏။ ထိုအခါ ဘုရားရှင်က... “အို...ချစ်သားနန္ဒ ၊ သင်သည် တစ်ကမ္ဘာပတ်လုံး တရားဟောခြင်းငှါ စွမ်းနိုင်အံ့။ ငါဘုရားသည်လည်း ရပ်လျက်ပင် တစ်ကမ္ဘာပတ်လုံး တရားနာတော်မူအံ့” ဟု မိန့်တော်မူလေ၏။
လက်ရှိခန္ဓာ၊ မတွယ်တာနှင့်၊ နောင်လာဘ၀၊ မတောင့်တဘဲ၊ ကြောင့်ကြစွဲဖြင့်၊ အမြဲမပြတ်၊ ၀ိပဿနာ ၊ လေ့လာကြိမ်ဖန်၊ အာစိဏ္ဏကံ၊ ဖြစ်ကြောင်းမှန်မူ၊ ထိုသည့်သူကား၊ အယူမလွဲ၊ ကတိမြဲ၏။ မီးလောင်စွဲမှ၊ ရေကိုတသော်၊ မရဖြစ်အင်၊ ပုံနှိုင်းယှဉ်၍၊ မဂ္ဂင်သန္ဓေ၊ တည်မြဲနေအောင်၊ မသေခင်က၊ ပြင်ဆင်တောက်လျှောက်၊ မေ့မပျောက်နှင့်၊ ချွေးပေါက်ယိုစီး၊ သေခါနီးဝယ်၊ အပြီးမုချ၊ မဂ္ဂင်ရလိမ့်၊ ကိစ္စမလျော် ၊ အကြောင်းပေါ်၍၊ မတော်တဆ၊ မဂ်မရဦး၊ ဘ၀အမွန်၊ တမလွန်တွင်၊ ထူးချွန်အံ့လောက်၊ နတ်ပြည်ရောက်၍၊ မဖောက်မပြန်၊ သောတာပန်စစ်၊ ဧကန်ဖြစ်မည်၊ မလစ် ၀ိပဿနာ
ရေးသားသူ အောင်ဦး ရေးသားချိန် 17.2.082ရေးသားခဲ့ရန်
ဥဒယဗ္ဗယဥာဏ်(ဖြစ်ပျက်မြင်တယ်) ဆိုတာ ဒီနေရာဖြစ်ပြီး ဒီနေရာပျက်သွားသလိုကိုးလို့ ဥာဏ်ရောက်တာကို ဆိုတာပါ။ အရှုခံနှင့်ရှုဥာဏ် ပြိုင်မဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက် တကယ်မြင်လိုက် တာကတော့ မရှိတာ သိတာပါပဲ။ ခန္ဓာကိုယ် ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် ဘာမှ မတွေ့စေနဲ့။ ပထမတော့ တွေ့ချင်တွေ့မှာ ပေါ့ လေ။ နောက်တော့ ဘာပေါ်ပေါ် ဖြစ်ပြီးပျက်သွားတာလေးသာ ဥာဏ်ထဲမှာ တွေ့ပါစေ။ တွေ့လို့ရှိရင် ဒီဥာဏ်ရင့်အောင်သာလုပ်တော့။ ကြပ်ကြပ်ရှုပေး။ ဘာမှ နောက်ပြန်ကြည့်မနေနဲ့။ အပြီးလုပ်တော့မယ်ဆို တာသာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါ။ မပေါက် မရှိပါဘူး။
ကျေးဇူးတော်ရှင် အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဦးဝိမလ(၁၈၉၉-၁၉၆၂)
ရေးသားသူ အောင်ဦး ရေးသားချိန် 17.2.080ရေးသားခဲ့ရန်
စိတ်သည် မြင်နိုင်ခဲ၏။ သိမ်မွေ့၏။ မိမိနှစ်သက်ရာ အာရုံကို အာရုံပြုလေ့ရှိ၏။ ပညာရှိသည် မိမိ၏စိတ်ကို စောင့်ထိန်းရ၏။ အကယ်၍သာ... မိမိ၏စိတ်ကို စောင့်ထိန်းနိုင်ခဲ့သော် ထိုစိတ်သည် ချမ်းသာကို ဆောင်၏။
(ဓမ္မပဒ-သာသနာတော်၌ ငြီးငွေ့သော ရဟန်တစ်ပါး ၀တ္ထု)
ရေးသားသူ အောင်ဦး ရေးသားချိန် 15.2.080ရေးသားခဲ့ရန်
စိတ်သည် ဆုံးမရန် အလွန်ခက်၏။ အလွန်လျှင်မြန်၏။ ရောက်ချင်ရာသို့ ရောက်တတ်၏။ ထိုစိတ်ကို ယဉ်ကျေးအောင် ဆုံးမနိုင်လျှင် ကောင်း၏။ ယဉ်ကျေးသော စိတ်သည် ချမ်းသာကို ဆောင်နိုင်၏။
ပညာရှိထံ၊ ရိုကျိုးနွံ၍၊ နည်းခံသင်မှ၊ ပညာရ၏။
ထကြွလုံ့လ၊ ဥဋ္ဌာနဖြင့်၊ လုံ့လရှိမှ၊ ဥစ္စာရ၏။
မခွနှုတ်လျှာ၊ မှန်ကန်စွာလျှင်၊ သစ္စာတည်မှ၊ ကျော်စောရ၏။
ကိုယ်ကဥစ္စာ၊ စွန့်လွှတ်ကာလျှင်၊ မေတ္တာရှေး၍၊ ပေးကမ်းတတ်မှ၊
ရေးသားသူ အောင်ဦး ရေးသားချိန် 15.2.08 1 ရေးသားခဲ့ရန်
ဖြစ်ပြီးအဟောင်း ၊ တိတ်ဇာတ်ကြောင်းကို ပြန်ပြောင်းစဉ်းစား ၊ မငြီးတွားနှင့်။ နောင်ခါဖြစ်လတ်၊ အနာဂါတ်ကို ဇာတ်ကြောင်းတွေးတော ၊ စိတ်မမောနှင့်။ ဖြစ်ဆဲဧကန် ၊ ပစ္စုပ္ပန်ကို ဝေဖန်ဥာဏ်ရှု၊ မျှတမှုဖြင့် ပူမှုကင်းစွာ ၊ နေစမ်းပါလော့။ သို့ပါလေမှ ၊ သင့်ဘ၀၀ယ် ဒုက္ခကင်းစွာ ၊ ချမ်းသာလာလိမ့်။
အတွေးအခေါ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ သူများမှားတာကို သင်ခန်းစာယူတတ်၏။ အတွေးအခေါ်ပညာနည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မှားမှ သင်ခန်းစာယူတတ်၏။ အတွေးအခေါ်ပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မှားတာတောင် သင်ခန်းစာမယူတတ်ပေ။
သဒ္ဓါ ၊ မေတ္တာ ရှေးရှုကာ ၊ ချစ်တာမြင့်မြတ်သည်။ သတိဥာဏ်ယှဉ် ၊ မုန်းတတ်လျှင် ၊ ၀ဋ်ခွင်လွတ်မြောက်သည်။ ဘ၀တိုင်းမှာ ၊ စောင်းမြောင်းကာ ၊ မဲ့တာကင်းပါစေ။ ဘ၀တိုင်းမှာ ၊ မူးရစ်ကာ ၊ သောက်တာကင်းပါစေ။
ရေးသားသူ အောင်ဦး ရေးသားချိန် 13.2.080ရေးသားခဲ့ရန်
သေရည်သောက်လင့်၊ သင့်မသင့်၌ ၊ ရေးခွင့်မသိ၊ ပျင်းရိမေ့ မူး၊ ကျေးဇူးမဆပ်၊ ဟိရောတ္တပ် ( ဟိရိ သြတ္တပ-အရှက် ၊ အကြောက်) ကင်း၊ ခပင်းများထို၊ အကုသိုလ်ကို၊ မပြိုလွယ်စွာ၊ ပြုကျင့်ရာသည်၊ ရှောင်ခါအပြန် အကျိုးတည်း။
မုသားစကား ၊ ပြောဆိုငြားမူ ၊ စကားမပြီ ၊ သွားမညီတည်း၊ ပုပ်ညှီပါးစပ်၊ ခြောက်ကပ်ကိုယ်ရေ၊ ဣနြေ္ဒနောက် ၊ ပုံယွင်းဖောက်၍၊ မရောက်သြဇာ၊ နှုတ်လျှာကြမ်းထော်၊ လျှပ်ပေါ်လော်လည် ၊ ရှောင်ခါအပြန် အကျိုးတည်း။
မိစ္ဆာစာရ ၊ ကျူးလွန်ကလည်း ၊ မုန်းကြအများ ၊ ရန်သူပွား၍ ၊ ရှားပါးလာဘ်တိတ်၊ ချမ်းသာဆိတ်၏၊ ဣတ္ထိပဏ္ဍုက် ၊ မျိုးယုတ်ခါခါ ၊ မျက်နှာမလှ ၊ အရှက်ရလျက် ၊ လက္ခဏဣနြေ္ဒ၊ ယွင်းသွေချို့သိမ်၊ စိုးရိမ်များစွာ ၊ ချစ်သူကွာသည်၊ ရှောင်ခါအပြန် အကျိုးတည်း။
အဒိန္နာဒါ ၊ ခိုးမိပါမူ ၊ ဥစ္စာလည်းမွဲ ၊ဆင်းရဲငတ်ဘိ၊ လိုရှိမရ ၊ ဘောဂပျက်စီး၊ ရေမီးသူခိုး၊ မွေခံဆိုးနှင့် ၊ မင်းဆိုးအပြား ၊ ရန်မျိုးငါးကြောင့်၊ ပျက်ပြားဥစ္စာ၊ ပြစ်များစွာသည် ၊ ရှောင်ခါအပြန် အကျိုးတည်း။
ပါဏာတိပါတ် ၊ သူ့သက်သတ်က၊ ချို့ လတ်အင်္ဂါ ၊ မွဲပြာရုပ်သွင် ၊ အားအင်ချို့ယွင်း ၊ လျင်ခြင်းလည်းဝေး ၊ ဘေးကိုကြောက်တတ် ၊ အသတ်ခံရ ၊ အနာများလျက် ၊ ချွေရံပျက်၍၊ အသက်တိုလှ၊ ပြစ်များစွာသည် ၊ ရှောင်ကအပြန် အကျိုးတည်း။
(၁) အလောင်းတော်သည်နောက်ဆုံးသောဘ၀၌မိခင်ဝမ်းကြာတိုက်တွင်ပဋိသန္ဓေနေတော်မူသည်။ ( ဒီမှာထူးခြားတာက နတ်ပြည်ကနေ စုတေကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ အလောင်းတော်တွေဟာ ဗြဟ္မာပြည်ကနေ စုတေပြီး ပဋိသန္ဓေ နေတော်မူတာမျိုးမရှိပါဘူး..တဲ့ ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဗြဟ္မာပြည်ကနေ လာရင် ကာမဂုဏ်ကို ရွံမုန်းတဲ့ စိတ် အထုံ လူ့ပြည်ကို ပါလာမယ် ။ အိမ်ထောင်ပြုမှာ မဟုတ်ဘူး။ (တချို. အပျိုကြီး၊ လူပျိုကြီး ၊တွေလဲ ဗြဟ္မာပြည်က လာလို့ အိမ်ထောင်မပြုတာလို့ပြောတာပဲ....ဤကားစာကြွင်း)အလောင်းတော်တွေဟာ ဒီလို စောစောစီးစီး ကတည်းက ကာမဂုဏ်ကိုရွံမုန်းနေရင်လည်းမဇ္စိမပဋိပဋာလမ်းစဉ်ကိုတွေ့ဖို့ခက်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။
(၂) မယ်တော်ဝမ်း၌ ထက်ဝယ်ပလ္ဘင် ဖွဲ့ခွေ၍ အရှေ.သို. မျက်နှာမူပြီးနေပါတယ် ။( အလောင်းတော်တွေဟာ သာမန်လူ သန္ဓေသားတွေလို အမိဝမ်းမှာ ပြောင်းပြန်မနေပါဘူး ။ အတည့်ပဲနေပါတယ် ။မယ်တော်ရဲ. ၀မ်းဗိုက်ဟာလည်း ပူထွက်လာခြင်းမရှိပါ ။ မယ်တော်ဟာ ကိုယ်. သားကို ဗိုက်ကနေ ကောင်းကောင်းမြင်နေရပါတယ် ။ ချင်ခြင်းတပ်ခြင်း ၊ နာကျင်အော့အန်ခြင်း မရှိပါ ။ အလောင်းတော်တွေဟာ မယ်တော်တွေကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းဒုက္ခ မပေးကြပါ ။ )
(၃) အလောင်းတော်ကို မတ်တတ်ရပ်လျက် ဖွားပါတယ် ။( ညစ်ပေမှု မရှိပါ ၊ မိခင်လည်း ကျန်းမာစွာ ရှိရပါတယ် ၊ နောက် (၇) ရက်မှာတော့ မိခင် ကံတော်ကုန်ရပါတယ် ။သကျ သာကီဝင် ဆိုသည်မှာ ပင်ကိုယ်စွမ်းရည်ရှိသူဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည့် အတိုင်း မွေးမွေးခြင်း ကိုယ့် ခြေထောက်ပေါ် ကိုယ်ရပ်ပါတယ် ။ စောင့်ကြည့်နေကြသော နတ်၊ဗြဟ္မာတွေတောင် မျက်လုံးပြူးကုန်ကြတယ် ဆိုပါတယ်(ဤကား။ အရှင် ဥာဏိသာရ၏ အဟော)
(၅) ဖွားပြီးပြီးခြင်း မြောက်အရပ်သို. ခြေ (၇) လှမ်းကြွကာ...... ဤလောက၌ ငါသာ အမြတ်ဆုံးတည်း ၊ ငါ၏ နောက်ဆုံး ပဋိသန္ဓေ နေရခြင်းတည်း ၊နောက်ထပ် ပဋိသန္ဓေ နေစရာ မလိုတော့ပြီ ......ဟု ကြုံး ၀ါးတော်မူပါသည်။(ထိုကာလတွင် အကိုးကွယ်ခံ ဘ၀သို့ ရောက်မှန်းမသိရောက်နေသော ဗြဟ္မာတွေကို အသိပေးကြုံးဝါးခြင်း ဟု ဆို၏ ။ ဂေါတမ ဘုရားလောင်းသည် (၃) ဘ၀၌ ဖွားစမှာပင် စကားပြော၏ ။ မဟောသဓာ ၊ ဝေဿန္တရာ နှင့် နောင်ဆုံးဘ၀ - (သုခမှတ်စု))
(၆) သူအို၊သူနာ၊သူသေ ၊ရဟန်း နိမိတ် (၄)ပါးမြင် ၊ သား(၁)ယောက်ဖွားသော ညမှသာ တောထွက်တော်မူကြသည်။ ( ထိုနိမိတ်ပြသော နတ်သားကို ဘုရားလောင်း၏ ဆရာ ၅-ယောက်တွင် ၁-ယောက် အပါအ၀င်ဟု သတ်မှတ်သည်။ )
(၇) အရဟတ္တဖိုလ်၏ တံခွန်ဖြစ်သော ရဟန်းအဖြစ်ကို ရယူပြီးမှ ဒုက္ကရစရိယ ကျင့်သည်။( အရဟတ္တဖိုလ်၏ တန်ဖိုးသည် ရဟန်းမှ မည်သည့် အမျိုးနှင့်မျှ မတန်ဟုဆိုသည်။ လူဝတ်ကြောင် မှ အရဟတ္တဖိုလ်ရလျှင်လည်း ရဟန်းဝတ်ချင်ဝတ်၊ မ၀တ်ချင်လျှင် ပရိနိဗ္ဗာန်စံဝင်ကြရသည်။ အကျယ်ပြောရင် အများကြီးပဲ ၊ သုဒ္ဓေါဓန မင်းကြီး ၊ မဟာသန္တတိ အမတ်ကြီး ဇာတ်တွေမှာပရိနိဗ္ဗာန်စံဝင်ကြရခြင်းအကြောင်း ဖတ်ပါလေ ။ )
(၈) ဘုရားဖြစ်မည့်နေ့ နွားနို့ ဃနာဆွမ်း ဘုန်းပေးတော်မူကြသည်။( ထိုဆွမ်းတွင် နတ်သြဇာပါတတ်ပြီး ဘုရားဖြစ်ပြီး (၇) ပတ် ၊ (၄၉) ရက်စာ အာဟာရ ဖြစ်သည်။ ဘုရားရှင်၏ ၀မ်းထဲတွင် အစာခြေလဲ မမြန် ၊ မြန်မြန်လဲ မဆာလောင်ပဲ သမာပတ်ဝင်စားခြင်း ၊ တရားတော်များကို ဆင်ခြင်သုံးသပ်ခြင်းများ အတွက် ကောင်းစွာ ထောက်ပံ့သည်။ )
(၉) မြက်အခင်းတွင် ထိုင်တော်မူလျက် ဘုရားဖြစ်သည်။
(၁၀) အာနပါန ကမ္မဌာန်းကို စီးဖြန်းတော်မူကြသည် ။(ဘုရားရှင်တို့သည် အာနပါန ကမ္မဌာန်းဖြင့်သာ သဗ္ဗညုတဥာဏ်တော်ကို ရရှိကြသောကြောင့် ဂေါတမ ဘုရားရှင်သည်လည်း အာနပါန ကို လွန်စွာ ချီးမွမ်းတော်မူသည်။ ပါဠိတော်တွင်လည်း -၁/ မဟာသတိပဌာနသုတ် ( ဒီ-၂ ၊ ၃၁ )၂/ မဟာသတိပဌာနသုတ် ( မ-၁ ၊ ၇၀ )၃/တတိယပါရာဇိက ပါဠိ ( ၀ိ-၁ ၊ ၈၉ )၄/ အာနာပါနဿတိ သုတ် ( မ-၃ ၊ ၁၂၂ )၅/ မဟာရာဟုလောဝါဒသုတ် ( မ-၂ ၊ ၈၈ )၆/ ကာယဂတာသတိသုတ် ( မ-၃ ၊ ၁၃၀ ) တို့၌ ဟောတော်မူခဲ့သည် ။
(၁၁) မာရ်စစ်သည်ကို အောင်တော်မူသည် ။ ( မာရ်နတ်ဆိုတာကတော့ နတ်ပြည် ၆-ထပ်မှာ ပေါ်ဆုံးထပ် ( ပရနိမ္မိတ ၀သ၀တ္တီ နတ်ပြည် - ကာမဂုဏ်ကို အလိုရှိတိုင်း ပြီးစေသော ဘုံ ) မှ နတ်ဆိုးတစ်ဦင်္းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ အဲဒီ့ နတ်ပြည်ရဲ့ အဓိပတိခေါင်းဆောင်က ၀သ၀တ္တီ နတ်မင်းကြီး ပါ ။ မာရ်နတ် ကတော့ ပွကြီးပေါ့ ။ ၃၁-ဘုံမှာ သူတန်ခိုးကြီးတယ် ၊ကာမဂုဏ်ဆိုတာ သတ္တ၀ါတွေ အတွက် သူကပဲ ဖန်ဆင်းပေးထားတာ မျိုး အထင် ရောက်နေသူပါ။ ဒါကြောင့် ကာမဂုဏ်ကို စွန့်ပယ်ဖို့ နည်းလမ်းမှန်မှန်နဲ့ တရားဟောမဲ့ ဘုရားလောင်းတွေဆိုရင် သူနှောက်ယှက်တာပါပဲ ။ အဲဒီ.ညနေစောင်း မာရ်နတ်နဲ့ တိုက်ပွဲကတော့ တော်တော်ကို ပြင်းထန်တယ်ပြောကြတာပဲ ။ ဘုရားလောင်းရဲ. အနားမှာ ဘုရားဖြစ်တာနဲ့ ခရူသင်းမှုတ်မယ်ဆိုပြီး ခရူသင်းကြီးကိုင်ပြီးစောင့်နေတဲ့ သက္ကမင်း (သိကြားမင်း) နဲ့ ဗြဟ္မာတွေ၊နတ်တွေလဲ တိုက်ပွဲစတာနဲ့ အကုန်ပြေးကြတာပဲတဲ့။ ထားပါတော့ ။ဘုရားရှင်က မဟာပထ၀ီ မြေကြီးကို တိုင်တည်တော့ မာရ်နတ်ကြီးလည်း ဂိရီမေခလာဆင်တော်ပေါ်က ပြုတ်ကျပြီး ထွက်ပြေးရပါတယ်။ အဲဒီမှာ မာရ်နတ်ကြီးကိုင်လာတဲ့ ရွှေဆောင်းတော်ကြီးဟာ ဗောဓိပင်နားမှာ ကျန်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီဆောင်းကို သိကြားမင်းကကောက်ပြီး ပဉ္စသင်္ခနတ်သားကို ပေးထားတာလို့ ပြောပါတယ်။ ဘုရားရှင် ဒီတိုက်ပွဲကို မေတ္တာပါရမီ ၊ အဓိဌာန် ပါရမီ တန်ခိုးတွေနဲ့ နိုင်ခဲ့ပါတယ် ။
(၁၂) ဗောဓိပလ္လင်၌သာ ၀ိဇ္ဇာ(၃)ပါးစသော ဆအသာဓာရဏ ...အစရှိသော ကျေးဇူးတရားအပေါင်းကို ရတော်မူကြပါတယ်။
(၁၃) ဗောဓိပင်ရဲ. ထက် ၀န်းကျင်၌သာ သတ္တ သတ္တာယကျင့်တော်မူကြပါတယ်။ (၇) ဌာနပေါ့ ဗျာ။ နည်းနည်းတော့ ပြောချင်သေးတယ် ။ (က) ပလ္လင်္ကသတ္တာဟ ။ ။ ဘုရားဖြစ်တဲ့ နေရာ (ပလ္လင်)ထက်မှာပဲ ကဆုန်လပြည့်ကျော် ( ၁ ) ရက်နေ့မှ (၇) ရက်နေ့အထိ မလှုပ်မရှား ဆက်ပြီး သီတင်းသုံးတော်မူပါတယ် ။ ပထမနေ့ ၊ နေ့အခါမှာ ဖလသမာပတ် ၀င်စားပြီး နေပါတယ် ။ညအခါမှာ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် တရားတော်ကြီးကို အနုလုံ ၊ ပဋိလုံ သုံးသပ်ဆင်ခြင်တော်မူပါတယ်။ " ယဒါဟဝေ ..." စသော ဥဒါန်း(၃) ဂါထာကို အသံမထွက်ဘဲ စိတ်ထဲမှ ကျူးရင့်တော်မူပါတယ်။ (သတ္တာဟ-၇-ရက် )(ခ) အနိမိသ သတ္တာဟ။ ။ ဗောဓိပင်ရဲ.အနီး အရှေ.မြောက် ယွန်းယွန်း ၁၄-လံအကွာ နေရာမှာ ကဆုန်လပြည့်ကျော် (၈) ရက်နေ့မှ (၁၄) ရက်နေ့အထိ ၇-ရက် ထပ်မံသီတင်းသုံးတော်မူပါတယ် ။ " ငါသည် ပါရမီများဖြည့်ခဲ့သောကြောင့် ဤပလ္လင်ထက်မှာ မာရ် (၅)ပါးကိုအောင်မြင်ပြီး ဘုရားဖြစ်ခဲ့ပြီ တကား " ဟုဆင်ခြင်ကာ ဖြောင့်ဖြောင့်မတ်မတ် ရပ်နေတော်မူကာ အပရာဇိတ ပလ္လင်ကို မမှိတ်သော မျက်စိဖြင့် (၇)ရက်လုံးကြည့်ရှုဝမ်း မြောက်နေတော်မူသည် ။[ အ = မ ၊ နိမိသ = မျက်စိမှိတ်သည် , အနိမိသ = မျက်စိမမှိတ်ဘဲ ](ဂ) (ရတနာ) စင်္ကမ သတ္တာဟ။ ။ နောက်တခါ ကဆုန်လကွယ်နေ့မှ နယုန်လဆန်း (၆) ရက်နေ့အထိ ၇-ရက် တွင် ဗောဓိပင်ပလ္လင် နဲ့ အနိမိသဌာန အကြား ၊ ဗောဓိပင်၏ မြောက်ဘက်၌ စင်္ကြံကြွကာ ထပ်မံသီတင်းသုံးတော်မူပါတယ် ။ ဒီနေရာမှာ နတ်တွေက "....ရှင်ဂေါတမသည် ဗောဓိပလ္လင်၌ တပ်မက်နေသေးသည် ၊ ဘုရားစင်စစ်မဖြစ်သေး " ..ယုံမှားသံသယဖြစ်ကြသည်။ ထိုယုံမှားပျောက်စေရန် ရေအစုံ ၊ မီးအစုံ ယမကပြာဋိဟာ ပြတော်မူပါတယ်။ စင်္ကြံကြွရင်း တရားဆင်ခြင်၊ဖလသမပတ် ၀င်စားသောကြောင့် " စင်္ကမ သတ္တာဟ " ခေါ်သည်။(ဃ) ရတနာဃရ သတ္တာဟ။ ။ ဗောဓိပင်၏ အနောက်မြောက် ၁၀-လံ အကွာတွင် နတ်များဖန်ဆင်းပူဇော်သော ရတနာရွှေအိမ်ထက်၌ နယုန်လဆန်း (၆) ရက်နေ့မှ (၁၃)ရက်အထိ အဘိဓမ္မာတရားတော် ကို ဆင်ခြင်နေတော်မူပါတယ်။အဘိဓမ္မာ ရှေးဦး (၆)ကျမ်းကိုဆင်ခြင်ရာတွင် ရောင်ခြည်တော် ကွန့်မြူးခြင်း မရှိသေးပါ ။နောက်ဆုံး ပဌာန်းဒေသနာတော်ကြီးကို ဆင်ခြင်သုံးသပ်တော်မူသောအခါမှသာ ရောင်ခြည်တော် (၆)သွယ် ကွန့်မြူးကာ နတ်၊ဗြဟ္မာတို့သည်လည်း ခြေတော်ရင်းမှာ ဦးခိုက်ကြကုန်၏ ။(င) အဇပါလသတ္တာဟ ( ဆိတ်ကျောင်း ညောင်ပင်) ။ ။ ဗောဓိပင် ရဲ. အရှေ. (၃၂)လံ အကွာမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ နယုန်လဆန်း (၁၄)ရက်နေ့မှနယုန်လပြည့်ကျော် (၅)ရက်အထိ (၇)ရက်ဖြစ်ပါတယ်။ မာရ်နတ်ရဲ. သမီး (၃) ယောက် ( တဏှာ ၊အရတီ ၊ရာဂါ ) က ဘုရားရှင်ကို မိန်းမမာယာဖြင့် ဖြားယောင်းဖို့ ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။ ( မိန်းကလေးတွေ ဘုရားရှင်ကိုတောင် မာယာနဲ့ လှည့်စားချင်သေးတာ ပုထုဇဉ် ပုရိသ တွေကတော့ လာပြောကောင်းမလဲ ၊ လာမှကိုပြောလို့ မကောင်းပါဘူး ။ ) ဒီ ဆိတ်ကျောင်း ညောင်ပင် မှာပဲ ဟုန်ဟုန်က ပုဏ္ဏားက အဘယ်သူကို ဗြဟ္မာဏ မည်ပါသလဲ လို့ မေးလျှောက်ပါတယ်။ ဘုရားရှင် ဒီနေရာမှာပဲ သတ္တ၀ါတွေကို တရားဟောဖို့ စပြီး စီစဉ်ဆုံးဖြတ်တော်မူပါတယ် ။ (စ) မုစလိန္ဒ သတ္တာဟ ( မုစလိန္ဒာအိုင်ဝယ် နဂါးပါးပြင်းအောက်ဌာန) ။ ဗောဓိပင် ရဲ. အရှေ. တောင် (၁၅)လံ အကွာ မှာ နယုန်လပြည့်ကျော် (၆)ရက်နေ့မှ နယုန်လပြည့်ကျော် (၁၂)ရက်ထိ ဖြစ်ပါတယ် ။ဒီမှာ ပြောင်းရွေ.သီတင်းသုံးစဉ်မှာ အခါမဲ့ မိုးရွာခဲ့ပါတယ်။ ဒီအခါမှာ မုစလိန္ဒာအိုင် နဂါးမင်းဟာ တန်ခိုးနဲ့ လိုတာကို ဖန်ဆင်းနိုင်ပေမယ့်် သူရဲ. ပကတိ ကိုယ်တော်နဲ့သာ ပါးပြင်းမိုးပြီး ရာသီဥတုဒဏ်ကနေ ကာကွယ်ပူဇော်ခဲ့ပါတယ်။နဂါးမင်းအား သတ္တ၀ါတွေကို မငြင်းဆဲဖို့ ဒေါသကို ထိန်းဖို့ ၊ ငါ ဟူသော မာန်မာန ကို ခွာဖို. ဆုံးမတော်မူပါတယ်။(ဆ) ရာဇာယတန သတ္တာဟ (လင်းလွန်းပင် )။ ။ဗောဓိပင် ရဲ. တောင်ဘက် (၄၀)လံ အကွာ..[ (၁၁)လံ ဟု စာမှာရှိပေမဲ့ ဗုဒ္ဓဂါယာမှာ လက်တွေ့အားဖြင့် (၄၀) လံ ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ် ] နယုန်လပြည့်ကျော် (၁၃)ရက်မှ ၀ါဆိုလဆန်း ( ၄)ရက်နေ့ အထိ (၇) ရက် ပတ်လုံး သမာပတ် ၀င်စား ပါတယ် ။ (၇) ရက်ပြည့်တဲ့ မနက်မှာ သိကြားမင်းက တဇုသီး ၊ တံပူတွေ ဆပ်ကပ်ပါတယ်။ ကိုယ်လက်သန့်စင် အပေါ့ ၊ အလေးသွားပြီး (၄၉)ရက်တာ ပင်ပန်းခဲ့ရသမျှကို သည်းခံတော်မူပါတယ်။ အဲဒီ့နေ့ ဘုရားရှင် အစာအာဟာရမှီဝဲရန် လိုအပ် နေချိန်မှာ မြန်မာနိုင်ငံ ၊ ရာမညတိုင်း ၊ ဥက္ကလာ ဇနပုဒ် ၊ပေါက္ကရ၀တ္တီ ဇနပုဒ် တို့မှ ကုန်သည်ညီနောင် တဖုဿ၊ဘလ္လိက မှ မုန့်ကျစ်ဆုပ် ဆပ်ကပ်ပါတယ်။ ( ပြောရရင် များတယ် ။ စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်လို့ သီတဂူဆရာတော် ရဲ့ တဖုဿ၊ဘလ္လိကညီနောင်တရား နာပါလေ ။ ) ဒီကုန်သည်ညီနောင် ကပ်တဲ့ ဆွမ်းကို လက်ခံဖို့ စတုမဟာရာဇ် နတ်မင်းကြီး (၄)ပါးမှ သပိတ် (၄)လုံး တပြိုင်တည်းကပ်လှူကြရာ ဘုရားရှင်က အဓိဌာန်နဲ့ (၁)လုံးတည်းဖြစ်စေပြီး အလှူခံပါတယ်။ ( ဒီသပိတ်တော်ကို အခုခေတ်မှာပါ ဖူးရရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲနော် ) ။ ကုန်သည်ညီနောင် ကို သံဃာမရှိသေးတဲ့ အတွက်ဒွေဝါစိက သရဏဂုံ (၂)ပါး ပဲ ပေးပါတယ်။ဆံတော် (၈)ဆူ စွန်.တော်မူပါတယ် ။ ဒီဆံတော်တွေကို ရွှေတိဂုံစေတီမှာ ဌာပနာပြုပါတယ်။
(၁၄) တရားဦးဟော စိမ့်သောငှာ ဗြဟ္မာမင်းက လျှောက်ရသည် ။( ၇ -သတ္တဟ အပြီး ၅၀-ရက်မြောက်နေ့မှာ အဘယ်သူအား တရားဟောရမည်နည်း ၊ အဘယ်သူသည် ခက်ခဲနက်နဲသော ဤတရားများကို ခေတ်ကာလ၏ အယူဝါဒများမှ ခွဲထွက်၍ လျင်မြန်စွာ နားလည်နိုင်မည်နည်း ဟု ဆင်ခြင် ကြည့်တော်မူပါတယ် ။ မဟာစည်ဆရာတော်ဘုရားကတော့ ဒီနေရာမှာ မြန်မြန်တရားထူးရမယ့် သူကို ရှေးဦးစွာ ဟောဖို့ ရည်ရွယ်ချက် ဖြစ်တယ် ။ ဆင်ခြင်တဲ့ နေရာမှာ ဘုရားရှင်တွေဟာ ပကတိမျက်စိကိုပဲ သုံးတော်မူကြတယ်လို့ ဟောပါတယ် ။ - ဘာကြောင့် ဗုဒ္ဓစက္ခု ( ဣန္ဒြိယပရောပရိယတ္တ ၊ အာသယာနုသယ ဥာဏ် (၂)ပါး ) ကို မသုံးတာလဲ ဆိုတာ မသိပါဘူး ။ ပကတိမျက်စိနဲ့ပဲ ကြည့်တော့ ပထမ မှာ ဒီလောက် ခက်ခဲနေတဲ့ တရားတွေကို နားလည်သဘောပေါက်ပြီး စောစောစီးစီး တရားထူးရမယ့် သူကိုမတွေ့ဘူးလို့ ဆိုပါတယ် ။ ဒီအခါ ဘုရားရှင်ဟာ မချိတင်ကဲနဲ့ တစ်လောကလုံး အန္ဓတွေကြီး ပါလား လို့ ညည်းတွားတော်မူပါတယ်။ ကိလေသာထူပြောလွန်းတဲ့ လောကကို တရားမဟောတော့ဘူး၊ တစ်ကိုယ်တည်း ဖိုလ်ချမ်းသာနဲ့ နေတော့မယ် ဆိုတဲ့ စိတ်အကြံလည်း ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီအခါမှာ ဗြဟ္မာမင်းကတရားဦးဟော ရန်လျှောက်ရပါတယ်။ဂေါတမဘုရားရှင်ကိုတော့ မဟာသဟမ္ပတိ ဗြဟ္မာမင်းက တောင်းပန်တယ် လို့ဆိုပါတယ်။ ဒီဃန်ိကယ် မှာတော့ ၀ိပဿီ ဘုရားရှင်လည်း ဒီလို ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ အတိအလင်းရေးထားပါတယ်။ )
(၁၅) ဣတိပတနမိဂဒါဝုန်တော ၌သာ ဓမ္မစကြာတရားဦးကို ဟောတော်မူကြပါတယ်။
(၁၆) တပို့တွဲ လပြည့်နေ့၌သာ ပါတိမောက် ပြတော်မူကြပါတယ် ။
(၁၇) ဇေတ၀န်မည်သော ကျောင်းတော်၌သာ သီတင်းများကြသည်။( ဂေါတမ ဘုရားရှင် ဇေတ၀န်မှာပဲ သီတင်းသုံးများရခြင်းကိုတော့ သီတဂူဆရာတော် စင်္ကာပူ မှာ ဟောခဲ့သော ကဏ္ဍဆုတောင်း တရားအရ ရှင်းပါတယ် ။ ဘုရားရှင်ရှိရာ မြို့၊တိုင်း တွင် သံဃာတော်လည်းများတတ်ရာ ပစ္စည်း(၄)ပါးကောင်းစွာ ထောက်ပံ့နိုင်သော ပြည်သူ၊ မင်း၊သူဌေး လိုပါတယ် ။ ဇေတ၀န်ကျောင်းတော်ရှိရာ သာဝတ္ထိမြို့မှာ အနာတပိဏ်၊၀ိသာခါလို ဥပါသကာ ၊ဥပါသိကာ ပေါများတယ် ။ ပြည်သူတွေ ဘာသာတရားလွန်စွာ ကိုင်းရှိုင်းတယ်။ ပိဋကတ်တော်မှာ ရေတွက်ကြည့်တော့ (၁၄) ၀ါမြောက် ၊ ( ၂၁ ) ၀ါမှ ( ၄၄ ) ၀ါ အထိ ဆိုတော့ ( ၂၅ ) ၀ါတောင်ဇေတ၀န်ကျောင်းတော်မှာ သီတင်းသုံးပါတယ်။ဇာတိ မြေ ကပိလ၀တ်မှ န်ိဂြောဓာရုံကျောင်းမှာ ( ၁၅) ၀ါမြောက်တစ်ဝါ သာ သီတင်းသုံးတော်မူပါတယ်။ )
(၁၈) သာဝတ္ထိမြို့၌ သာ ယမိုက်ပြာဋိဟာပြတော်မူပါတယ် ။( ယမိုက် + ပြာဋိဟာ = အစုံစုံ + တန်ခိုး ။ ရေအစုံ၊ မီးအစုံ ဟုဆိုအပ်သော အစုံလိုက် အစုံလိုက် ဖြစ်ပေါ်စေသော တန်ခိုးတော် )
(၁၉) တာဝတိသာ၌သာ အဘိဓမ္မာတရားဟောပါတယ် ။ မြတ်စွာဘုရားသည် ပထမ၀ါကို မိဂဒါဝုန်မှာ ၀ါကပ်တော်မူပြီး ဒုတိယ၀ါ၊ တတိယ၀ါ၊ စတုတ္ထ၀ါတို့ကို ရာဇဂြိုဟ်ပြည် ဝေဠုဝန်ကျောင်း၊ ပဉ္စမ၀ါကို ဝေသာလီပြည်၊ ဆဋ္ဌ၀ါကို မကုဠတောင် စသည့် နေရာဌာနများ၌ ၀ါကပ်တော်မူသည်။ သတ္တမ၀ါကို တာဝတိံသာနတ်ပြည်၌ ၀ါကပ်တော်မူပြီး မယ်တော်ဖြစ်ခဲ့ဖူးသည့် သန္တုဿိတ နတ်သားကို အမှူးထား၍ အဘိဓမ္မာဒေသနာတော်ကို ၀ါတွင်းသုံးလပတ်လုံး အသံမစဲ ဟောတော်မူသည်။အကျယ်နည်းမယ်တော်ကို ကျေးဇူးဆပ်လိုခြင်း၊ မိဘကျေးဇူးကို သတ္တ၀ါတို့နားလည်စေလိုခြင်း၊ အဘိဓမ္မာတရားကို အစအဆုံး တထိုင်တည်း ဟောကြားလိုခြင်း၊ အစ အဆုံး တထိုင်တည်းဟောမှ နာကြားရသော တရားနာတို့ အကျိုးထူး ရနိုင်ခြင်း၊ အဘိဓမ္မာဒေသနာတော်၏ ကျယ်ဝန်းနက်နဲမှုကို သိစေလိုခြင်း၊ လူတို့သက်တမ်းနှင့် သုံးလလောက်ဟောမှ ကုန်နိုင်မည့် တရားဖြစ်သည့်အတွက် လူတို့ ဣရိယာပုထ်ဖြင့် ဟောသူရော နာသူပါ မနေနိုင်ခြင်း တို့ကြောင့် အဘိဓမ္မာအကျယ်နည်း (၀ိတ္ထာရနယ) ကို တာဝတိံသာနတ်ပြည်၌ ဟောရခြင်းဖြစ်သည်။အကျဉ်းနည်းမြတ်စွာဘုရားသည် လူသားဖြစ်တော်မူသည့်အတွက် ဆွမ်းခံခြင်း ဆွမ်းစားခြင်း ရေချိုးသန့်စင်ခြင်း စသည် ပြုလုပ်ရန် နိမ္မိတရုပ်ပွားတော်ကို အဓိဋ္ဌာန်ဖြင့် ဖန်ဆင်းပြီး လူ့ပြည်သို့ ကြွတော်မူရာတွင် ဟိမ၀န္တာစန္ဒကူးတော၌ နေ့သန့်စင် (အနားယူ) တော်မူသည်။ ထို စန္ဒကူးတောတွင် အရှင်သာရိပုတ္တရာ မထေရ်သည် မြတ်စွာဘုရားအား ၀တ်ကြီးဝတ်ငယ် ပြုစုခစားခိုက် မြတ်စွာဘုရားက ရှင်သာရိပုတ္တရာအား အကျဉ်းချုပ်နည်း (သင်္ခေပနယ) ကို ဟောတော်မူသည်။
မကျဉ်းမကျယ်နည်းရှင်သာရိပုတ္တရာက မြတ်စွာဘုရား ဟောခဲ့သည့် အကျဉ်းနည်းကို တပည့် ရဟန်းငါးရာတို့အား မကျဉ်းမကျယ် နည်း (နာတိဝတ္ထာရ-နာတိသင်္ခေပနယ) ဖြင့် ပြန်လည် ပို့ချတော်မူသည်။နောက်တနေ့တွင် ထိုပို့ချချက်အား မြတ်စွာဘုရားထံမှောက်၌ ပြန်လည်တင်ပြ အစစ်ဆေးခံရာ မြတ်စွာဘုရားက နားထောင်၍ လက်ခံအတည်ပြု တော်မူခဲ့သည်။ဤသို့ဖြင့် အဘိဓမ္မာ ဒေသနာတော်ကြီးသည် ခုနစ်ဝါမြောက်ဖြစ်သော မဟာသက္ကရာဇ် ၁၀၉ ခု ၀ါဆိုလပြည့်ကျော် ၁-ရက်မှ သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့ထိ ၃-လအတွင်း နည်း ၃-နည်းဖြင့် လူ့ပြည်-နတ်ပြည် တပြိုင်တည်း ပေါ်ထွန်းခဲ့လေသည်။ အဘိဓမ္မာ သင်တန်းမှာ မှတ်သားမိတာကတော့ ၀ါတွင်း ( ၃ ) လ မှာ - ၁။ ဓမ္မသင်္ဂဏီကျမ်း ကို ( ၁၂ ) ရက်၂။ ၀ိဘင်္ဂ (၀ိဘင်းကျမ်း)ကို ( ၁၂ ) ရက်၃။ ဓာတုကထာကျမ်းကို ( ၆ ) ရက်၎။ ပုဂ္ဂလပညတ္တိ (ပုဂ္ဂလပညတ်ကျမ်း)ကို ( ၇ ) ရက်၅။ ကထာဝတ္ထုကျမ်းကို ( ၈ ) ရက်၆။ ယမက (ယမိုက်ကျမ်း)ကို ( ၂၀ ) ရက်၇။ ပဋ္ဌာန (ပဋ္ဌာန်းကျမ်း)ကို ( ၂၅ ) ရက် ဟောတော်မူခဲ့သည်။
နတ်ပြည်မှာ ဘုရားရှင် ရဲ့ နှုတ်ထွက်စကားပြောနှုန်း မြှင့်ပြီးဟောလို့ရတာ ဟာလဲ အကြောင်းတစ်ခုလို့ ဆိုပါတယ်။ ကျွန်တော် တွက်ကြည့်တာကတော့ လူ့ပြည် (၁၀၀) နှစ် = တာဝတိသာ(၁) ရက်... (ယမိုက်ကျမ်း-အရ)လူ့ပြည် (၁) နှစ် = လူ့ပြည် (၁၂) လ = တာဝတိသာ ( ၀.၂၄ ) နာရီလူ့ပြည် (၃) လ = တာဝတိသာ ( ၀.၀၆ ) နာရီ = တာဝတိသာ (၃.၆) မိနစ် နတ်တွေအတွက်တော့ (၃.၆) မိနစ် ပဲကြာပါတယ် ။ သူတို့ရဲ့ အချိန်အတိုင်းအတာတွေ ကျွန်တော်တို့နဲ့ ရေတွက်ပုံ တူရင်ပေါ့ လေ။ (၆၀) မိနစ် = (၁)နာရီတွေ ဘာတွေ၊ မရှိရင်တော့ ဒီလိုတွက်လို့ မရနိုင်ဘူးပေါ့ ။
(၂၀) သင်္ကဿနဂိုရ်ပြည်၌သာ နတ်ပြည်မှ သက်တော်မူပါတယ် ။
(၂၁) ဖလသမာပတ်ကို မပြတ်ဝင်စားတော်မူပါတယ် ။
(၂၂) နံနက်အခါ ၊ ညဉ့်အခါ တို့၌ ကျွတ်ထိုက်သော ဝေနေယျကို ကြည့်ရှုတော်မူပါတယ်။( နေ့ (၃) ခါ ၊ ည (၃)ခါ ..၆ ခါ ကြည့် ပါတယ် )
(၂၃) အကြောင်းရှိမှ ၀ိနည်းတရားတို.ကို ပညတ်တော်မူပါတယ် ။( ဒီဝိနည်းတွေကို စောစောကတည်းက ကြိုထုတ်ထားရင် ဘယ်သူမှ ရဟန်းဝတ်ရဲ / ၀တ်ချင် မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ် ။ ဒါကြောင့် ဖြစ်စဉ်ပေါ်လာမှ စည်းကမ်းထုတ်တာဖြစ်ပါတယ် ။ )
(၂၄) အတ္ထုပ္ပတ္တိ နဲ့ တိုက်ဆိုင်မှုရှိလျှင် အတိတ်မှ ဇာတ်တရားများကို ဟောပါသည်။
(၂၅) ဆွေတော် ၊ မျိုးတော်တို့၏ အစည်းအဝေး တရားပွဲများတွင် ဗုဒ္ဓ၀င် ကိုသာဟောတော်မူကြသည်။
(၂၆) ဧည့်သည်ရဟန်းတို့နှင့် တရားစကား ပြောတော်မူကြသည်။
(၂၇) ဒါယကာတို့ ဖိတ်၍ ၀ါဆိုတော်မူသော် ၊ ၀ါကျွတ်လျှင် ဒါယကာတို့ အားပန်ကြားပြီးမှ သာ ထွက်ခွာကြွသွားတော်မူကြသည်။
(၂၈) နေ့စဉ် အခါခပ်သိမ်း ဗုဒ္ဓကိစ္စငါးပါးကို ပြုတော်မူသည်။
ဗုဒ္ဓကိစ္စငါးပါး ။ ။ ၁/ ပုရေဘတ္တကိစ္စ = နံနက်ပိုင်း၌ ဆွမ်းခံကြွတော်မူခြင်း၊ အလှူရှင် တို့အား အခွင့်အားလျော်စွာ မနုမောဒနာပြုခြင်း ကိစ္စ။၂/ ပစ္ဆာဘတ္တကိစ္စ = နေလွဲအခါ နဲ့ ညနေပိုင်း၌ ပူဇော်ရန်လာသူတို့၏ အပူဇော်ခံပြီး သင့်တော်သော တရားဟောခြင်းကိစ္စ။၃/ ပုရိမယာမ ကိစ္စ = ညဉ့်ဦးယံ၌ ရဟန်းတို့အား တရားဟောခြင်း၊ကမ္မဌာန်းပေးခြင်း စသော ကိစ္စ။၄/ မဇ္စိုမယာမကိစ္စ = သန်းခေါင်ယံ ၌ စကြာဝဠာ တိုက်တစ်သောင်းမှ လာရောက်ကြကုန်သော နတ်၊ဗြဟ္မာတို့၏ အမေးပုစ္ဆာပြဿနာတို့ကို ဖြေဆိုတော်မူခြင်းကိစ္စ။၅/ ပစ္ဆိမယာမ ကိစ္စ = မိုးသောက်ယံ ၏ ၃ ပုံ ၊ ၁ ပုံ တွင် - ပထမတပုံ၌ စင်္ကြံကြွတော်မူခြင်း ၊ ဒုတိယတပုံ၌ သီဟသေယျဖြင့် လက်ယာနံတောင်း လျောင်းစက်တော်မူခြင်း၊ တတိယအပုံ၌ မဟာဂရုဏာဖြင့် စတုတ္ထဈာန်သမာပတ်ကို ၀င်စားတော်မူ၍ ထို ဂရုဏာသမာပတ်မှ ထတော်မူသောအခါ (အရုဏ်တက်ခါနီး) ယနေ့ ချွတ်ထိုက်သော သတ္တ၀ါကို ဗုဒ္ဓစက္ခုဖြင့် လောက(၃)ပါးကို ကြည့်တော်မူခြင်း ကိစ္စ ။ ( သုတ်သီလက္ခန် အဌကထာ - မှ )
(၂၉) ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုအံ့သောနေ့၌ သားပြွမ်းဆွမ်းကို ဘုဉ်းပေးတော်မူသည်။
(၃၀) သမာပတ်ဝင်စားပြီးမှ ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတော်မူသည်။
ရေးသားသူ အောင်ဦး ရေးသားချိန် 13.2.08 1 ရေးသားခဲ့ရန်
သူတပါးရဲ့ အလိုဆန္ဒကို ဖြည့်ဆည်းပေးလိုက်ရတာ ကိုယ့်မှာ
ကိုယ့်ရဲ့မေတ္တာ ဂရုဏာ၊ ကိုယ့်ရဲ့စေတနာကို
သိပ်ကျေနပ်စရာကောင်းတယ်၊ ဒါ့ကြောင့် သူတပါးကို
ဥစ္စာထဲမှာ အနှစ်ရှာ တွေ့တာ ဒါန ပဲ။
ခန္ဓာထဲမှာ အနှစ်ရှာ တွေ့တာ သီလ ပဲ။
၀ိဥာဉ်ထဲမှာ အနှစ်ရှာ တွေ့တာ ဘာဝနာ ပဲ။
ရေးသားသူ အောင်ဦး ရေးသားချိန် 6.2.080ရေးသားခဲ့ရန်
သူတော်သူမြတ် ၊ ဆည်းကပ်မှန်စွာ ၊
သူမြတ်တရား ၊ နာကြားသေချာ ၊
သင့်အောင်စိတ်ထား ၊ တရားကျင့်ရာ ၊
(၁) အစွဲကင်းခြင်း (ချစ်ခြင်း ၊ မုန်းခြင်း အစွဲ) ။
(၂) တစ်ကိုယ်ကောင်း မဆန်ခြင်း (အများအကျိုးအတွက် ဆောင်ရွက်ခြင်း) ။
(၃) ကုသိုလ်ပူနွေးခြင်း (ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ကို မမေ့မလျော့ ပြုလုပ်ခြင်း) ။
(၄) ယုံမှားကင်းခြင်း (အသိအမြင် မှန်ကန်ခြင်း) ။
ရေးသားသူ အောင်ဦး ရေးသားချိန် 3.2.080ရေးသားခဲ့ရန်
(၁) မူးယစ်နေသော မိတ်ဆွေကို စောင့်ရှောက်တတ်၏။
(၂) မူးယစ်နေသော မိတ်ဆွေ၏ ပစ္စည်းဥစ္စာကို စောင့်ရှောက်တတ်၏။
(၃) ကြောက်ရွံ့နေသော မိတ်ဆွေ၏ အားကိုးရာ ဖြစ်၏။
(၄) ပြုဖွယ်ကိစ္စ ဖြစ်ပေါ်လာက အကူအညီ တောင်းခံသည်ထက် နှစ်ဆတက်သော စည်းစိမ် အထောက်အပံ့ ပေးတတ်၏။
ဆောင်ပုဒ်။ ။ မေ့လျော့စောင့်လှာ၊ ဥစ္စာစောင့်ရှောက်၊ ဘေးရောက်ကိုးကွယ်၊ ပြုဖွယ်ရှိက၊ နှစ်ဆဥစ္စာ ၊ ချေးပေးလှာသည်၊ လေးဖြာ ဥပကာရတည်း။
ရေးသားသူ အောင်ဦး ရေးသားချိန် 2.2.080ရေးသားခဲ့ရန်
ငါတို့နေရာ၊ ဤကမ္ဘာ၊ တဏှာ အုပ်စိုးသည်။
တဏှာစေရာ၊ မနေသာ၊ ဖွေရှာ ဆက်ရသည်။
ရသည့်ဥစ္စာ၊ ချစ်သူပါ၊ စွန့်ခွါ သွားရမည်။
တကယ့်အရေး၊ တကယ်ဘေး၊ ဘယ်သွေး ဘယ်သား မကယ်ပြီ။
ငါနှင့်ရွယ်တူ၊ ငါ့အောက်လူ၊ ကြီးသူသေကြ များလှပြီ။
ခဏမစဲ၊ အိုစမြဲ၊ ကိုယ်လဲ သေဘက် နီးခဲ့ပြီ။
ဇရာမီးတောင်၊ ကိုယ်ထဲလောင်၊ သေအောင်မြှိုက်တော့သည်။
မသေရခင်၊ သွားလမ်းစဉ်၊ ကြိုတင်ပြင်သင့်ပြီ။
ဒါနသီလာ၊ ဘာဝနာ၊ လမ်းသာထွင်လိမ့်မည်။
မဂ္ဂင်ယာဉ်ကြီး၊ အမြန်စီး၊ ခရီးထွက်တော့မည်။